Ogaden News Agency (ONA) – Meles wuu dhintay. Ma dhiman. Yaa Dumaali doona Kursiga Meles baneeyo?
Meles wuu dhintay. Ma dhiman. Yaa Dumaali doona Kursiga Meles baneeyo?
Posted by ONA Admin	/ August 1, 2012
Waxaa kor u sii kacaya quusashadii xaalada caafimaad iyo rajadii ay ka qabeen intii kula jirtay jikada soo noqoshadii Gacan-ku-dhiiglihii dalka Itoobiya Meles Zanawi. Sidii loogu qaaday Isbitaal ku yaala Magaalada Brussels, wax war ah kama soo bixin aan ka ahayn inuu ku jiro xaalad khatar ah sida ay tilmaamayaan warar kala duwan iyadoo mucaaradka ay xaqiijinayaan in uu dhintayba. Xunuunka Meles waxaa la qarinayey mudo dheer muqaalkiisana waxaa dadka ugu dambaysay bishi June.
Sida warar hoose ay sheegayaan Waxaa lagu soo celiyey Meles Zanawi Isbitaal ku yaala Itoobiya kadib markii xaaladiisa caafimaad ay hagaagi wayday amaba lagaga quustay dhinaca wadamada dibada. Dad badanna waxay aaminsan yihiin in uu qaboojiyaha Isbitaalka Brussels ku jiro maydkiisii lana sugayo inta la diyaarinayo cidii dalka xukumi lahayd. Sido kale waxaa laga baqayaa in uu ka bilowdo Itoobiya kacdoonkii Carabta oo kale (Arab spring). Halkaasna uu ka dhaco qarax balaadhan oo shucuubtii la cabudhin jiray 100 sano iyo ka badan intay silsiladaha jabiyaan dib loo soo celin kari waayo.
Dhinaca kale waxaa jira wali muran iyo is qabqabsi ka taagan cidii dalka xukunkiisa la wareegi lahayd, Sidoo kale waxay wararku intaasi ku darayaan in ku xigeenkii Zanawi lagu dhawaaqi doono inuu howsha sii wado, halka warar kale ay sheegayaan in Xaaskiisa xilka si KMG-nimo ah loogu sii magacaabi doono. Dastuurka Itoobiya ma sheegayo cida qabanaysa ama xilka la wareegaysa haddii ra’isulwasaaraha ay wax ku dhacaan. Tan kale ku xigeenka ra’isulwasaaraha dhismaha dastuuriga kuma jiro lamana soo dooran ee Meles baa magacaabay, arintaasna waxay dhalisay muran kale. Dhinaca sharciga arrinku aad buu uga qasanyahay kumana cadda qofka dalka xukunkiisa si sharci ah ula wareegaya aan ka ahayn in Barlamaanka Federaalku kulan deg deg ah yeesho Doorashana lagu dhawaaqo. Inta ka horeysa doorashada yaa xukunka sii qaban? Ma cadda.
Kalidii taliye Meles Zinawi oo ay caalamka u muuqatay hadda kali-taliyenimadiisii ayaa maanta la la’yahay qofkii qaban lahaa ama dumaali lahaa Xukunka Itobiya. Meles wuxuu ku dadaalay mudadii uu xukunka hayey in uu iska foogyo ama uu ka takhluso cid kasatoo uu u arko inuu khatar ku yahay. Wuxuu horay uga takhlusay ragii ay halganka soo wada galeen ee uu filayey in ay mar uun kala wareegi doonaan xukunka ee ka soo jeeday xisbiga Tigray ee (TPLF).
Haddaba waxaan eegaynaa cida uu loolanka iyo boobka dhaxalka kursiga Itoobiya u dhaxeeyo inta aan la soo gaadhin mucaaradka itoobiya oo aad u badan.
TPLF dhexdeeda waxay u qaysantahay 2 qaybood.
1.Ragii rug caddaga ahaa ee uu horay uga takhlusay oo istusay inay heleen fursad.
2.Kuwii uu soo kiciyay Meles ama daacada u ahaa oo ay ugu horaysa afadiisa.
Kooxda Kowaad waxaa Hogaaminaya ninka lagu magacaabo Sebhat Nega waxaana ka go’an in ay xukunka la wareegaan. Kooxda labaadna waxaa ka mid ah xaaskiisa Azeb Mesfin, Gen.Getachew Assefa, Birg.Gen. Gebredella, Gen. Mohamed Samora iyo rag badan oo ciidamada xukuma Melesna uu soo barbaariyey. Waxay kooxdan doonayaan in maqaarsaar ahaan ay xukunka ku hayaan ninka hadda ku simaha u ah ee Hailmariam Desalegn oo ka soo jeeda qoomiyada koonfurideed dhawaaana uu Meles ku soo daray xisbiga EPRDF. Ninkan oo ah wasiiraka arrimaha dibada malaha wax awooda ah laakiin waxaase doonaya in ay isticmaalaan qayb ka mid ah Tigreega.
Ugu danbeyntii kalidii taliye Meles Zanawi oo hadda u muuqda mid koomo sii galaya miyirkiisuna sii daboolmayo, haduusan dhiman sida ay mucaaradka u badinayaan, marka loo eego xaaladiisa nololeed ayaa qeyb ka ahayd laguna xasuusan doona Xasuuqii iyo nacaybkii uu u gaysatay shacabka Soomaalida Ogaadeeniya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaana laga yaaba sidii lagu yaqiinay xukuumadaha kali-taliska ah inay horseedo dhimashadiisa burburkii Itoobiya.